Google kwụsịrị ire ya iko eziokwu Google kaadiboodu | Gam akporosis
N'oge Google I / O 2014, Google wepụtara aka yaGoogle kaadiboodu, otu kaadiboodu ebe a na-etinye a ama ma si otú a nwee ike ịnụ ụtọ eziokwu dị adị na vidiyo 360 ọkachasị, nnwale nke butere teknụzụ a nso ndị ọrụ na-adịghị mma.
A nọgidewo na-ere iko ndị a ruo ụbọchị ole na ole gara aga, ebe Google kwụgidere akwụkwọ mmado na-enweghị ngwaahịa, akwụkwọ mmado nke yana ozi nke ọ na-agwa na ngwaahịa a. agaghị adị ọzọ. Google na-agbaso otu ụzọ ahụ Samsung dị afọ ole na ole gara aga na Galaxy VR.
Google Cardboards adighizi ere na Googlelọ Ahịa Google. Anyị na-aga n'ihu na-enyere ndị obodo aka ịmepụta ahụmịhe ọhụụ site na nke anyị.
Google Cardboards bu nke kaadiboodu, eriri igwe na acho acho acho acho acho. Ha dakọtara na ma gam akporo smartphones na iPhones, nwere ụdị n'etiti 4 na 6 sentimita asatọ.
N'oge na-adịbeghị anya, Google nwere hapụrụ mmepe nke ngwa ngwa ngwa ngwa ha na mgbakwunye ịkwụsị ịkwụsị ire Deaydreams.
Ihe okike a bu David Coz, onye oru Google, ya na ya 20% nke oge ụbọchị ọrụ gị na Google na-enye ndị ọrụ ya ohere ịrara na echiche ndị ọzọ.
Ihe oru ngo a ghọrọ Open Source na 2019Ọ bụ ezie na a na-ere Google Cardboards na Storelọ Ahịa Google, mana o doro anya na ha enwekwaghị mmasị mbụ iji gaa n'ihu na mmepe ha, n'agbanyeghị ịbụ ọnụ ụzọ maka teknụzụ a (maka ọnụahịa ya).
Ugbu a na ugbu a anaghịzi ere ha na Storelọ Ahịa Google, ọ bụ ndị obodo na-elekọta ẹkedori ọhụrụ ụdị dakọtara na ụdị ama nke oge a (n'etiti 6 na 7 sentimita asatọ).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google kwụsịrị ire ya mebere iko nke kaadiboodu Google Cardboard